Ogaden News Agency (ONA) – Dowlada Maraykanka oo Shacabkeeda uga digtay Aaditaanka Itoobiya.
Dowlada Maraykanka oo Shacabkeeda uga digtay Aaditaanka Itoobiya.
Posted by Dulmane	/ August 26, 2017
Wasaarada Arimaha Dibada ee Maraykanka ayaa soo saartay digniin culus oo kusocota muwaadiniinta American ka ah ee kusugan wadanka Gumaysiga Itoobiya ama kuwa doonaya in ay usafraan wadanka qasan ee Itoobiya.
Wasaarada Arimaha Dibada ee Maraykanka oo soo saartay hadal qoraal ah ayaa sheegtay guud ahaan wadanka Itoobiya uu yahay meel halis ah sidaas darteedna loobaahan yahay in aysan muwaadiniinta Maraykanka ihi usafrin wadanka Itoobiya, igagoo kuwa kusugan Itoobiya na ka codsaday in ay si dag dag ah uga soo baxaan.
Ma aha markii ugu horaysay ee dowlada Maraykanku ay digniin kasoo saarto aaditaanka wadanka Itoobiya, waxayna dowlada Maraykanku sheegtay in uu wadanku umuuqdo mid ay kala dambayntii luntay, sidaas darteedna ay adagtahay in dad shisheeye ah ay kunoolaadaan.
Qoraalka dowlada maraykanku ay soo saartay ayaa lagu sheegay in xukuumada wayaanuhu aysan tixgalinin safaaradaha kusugan magaalada Addis Ababa iyagoo sida qoraalka lagu sheegay ay ciidanka gumaysigu xidhaan isla markaana garaacaan dadka shisheeyaha ah ee wadanka kusugan.
Sidoo kale digniinta dowlada Maraykanka ayaa lagu sheegay in xukuumada wayaanuhu ay xanibaad kusoo rogtay adeegyadii Internet-ka iyo talafoonada ay safaaraduhu isticmaalaan, iyadoo sida qoraalka lagu xusay ay adagtahay in ay safaaraduhu shaqeeyaan.
Dhinaca kale waxaa digniino noocan oo kale ah soo saaray wadamada Ingiriiska, Jarmalka, Norway, Australia, Canada iyo wadanka Maraykanka oo soosaaray dhowr digniinood oo is xigxigay, digniinta ugu dambaysay ee dowlada Maraykanka ayaa kusoo aaday xili kacdoonada shacabku ay gaadheen meel halis ah, iyadoo wax kala socda lalayahay.